सुष्मा स्वरजले उपेन्द्रलाई सोधिन्ः संशोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो? – Etajakhabar
सुष्मा स्वरजले उपेन्द्रलाई सोधिन्ः संशोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो?
काठमाडौँ । आफूसँग सल्लाह नगरी नयाँ संविधान जारी गरेको भन्दै भारतले लगाएको नाकावन्दीको तत्काली प्रधानमन्त्री ओलीले कडा प्रतिकार गरेका थिए । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला नेपाल चीनसँग नजिकिन पुगेको थियो । त्यो बेला पारवहन र वेल्ट एण्ड रोड परियोजनाबारेमा पनि सम्झौता भएको थियो ।
जसका कारण भारत ओलीसँग चिढिएको थियो । त्यहीकारण ओली र भारतबीचको सम्बन्ध अझै सुध्रिसकेको छैन। ओलीकै नेतृत्वमा वामपन्थीले चुनाव जितेपछि ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्नुको विकल्प भारतसँग थिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
चुनावपछि ओलीलाई सरकारमा जान रोक्न भारतले मधेसवादी, माओवादी र कांग्रेसलाई मिलाउन हरसम्भव कोशिश पनि गरेको थियो । तर, त्यो प्रयास असफल भयो अनि मोदीले निर्वाचन जितेको र भावी प्रधानमन्त्री भन्दै ओलीलाई फोन गरेर बधाई दिए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २०, २०७४ समय: ७:१८:४६